काठमाडौ रेडजोनमा : सिडिओ भन्छन्, ‘भदौ ८ वाट पूर्ण निषेधाज्ञा ! « Gaunbeshi
काठमाडौ रेडजोनमा : सिडिओ भन्छन्, ‘भदौ ८ वाट पूर्ण निषेधाज्ञा !
काठमाडौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकामा संक्रमितको संख्या तिब्र ढंगले बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौ उपत्यकालाई रेड जोनका रुपमा ब्याख्या गर्दै फेरी निषेधाज्ञा कडा बनाउन सक्ने संकेत गरेको छ । पछिल्लो तथ्य अनुसार काठमाडौ उपत्यकामा मात्रै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या चार हजार नाघेको छ ।
उनका अनुसार ६२ जनाको अहिले उपचार भइरहेको छ । भक्तपुर अस्पतामा भने कोरोनाको पोजेटिभीटी दर नै ५० प्रतिशत बढी रहेको छ। उपचारका लागि पुग्ने मध्य ५० प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपत्यकालाई रेडजोन भन्दै कडाई गर्ने संकेत गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले अवस्था यही रहे पूर्ण निषेधाज्ञा हुनसक्ने संकेत गरेको छन्।
‘भदौ ८ गते सम्म पुरानै निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइएको भएपनि त्यसपछिको अवस्था आँकलन गरेर पूर्ण निधेषाज्ञा लगाउने तर्फ छलफल सुरु भएको बताएका छन् । दैनिक अस्पतामालमा भर्ना हुने कोरोनका विरामीहरुको अध्ययन पनि गरिरहेका छौं। लाग्छ यही अवस्था रह्यो भने पूर्ण निषेधाज्ञा हुन सक्छ।’ उनले भने ।